एक्कासी किन हास्यो कहिलै नहास्ने कालभैरवको मूर्ति ? के हुन्छ अब ? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Horoscop/एक्कासी किन हास्यो कहिलै नहास्ने कालभैरवको मूर्ति ? के हुन्छ अब ?
एक्कासी किन हास्यो कहिलै नहास्ने कालभैरवको मूर्ति ? के हुन्छ अब ?काठमाडौंको हनुमानढोका दरबारको प्रांगणको उत्तरपश्चिमी भागमा काल भैरवको ठूलो प्रस्तर मूर्ति छ ।
कालो प्रस्तरबाट बनेको यो मूर्ति अति ठूलो र डरलाग्दो छ । यो मूर्ति १२ फिट अग्लो छ । यो मूर्ति प्राचीन कालतिर बनाइएको मानिन्छ तर यस स्थानमा यसको स्थापना भने कान्तिपुरे राजा प्रताप मल्लले गराएका हुन् । कतिपय श्रद्धालुहरू काल भैरवलाई काली मानेर पनि पूजाआजा गर्ने गर्दछन् ।
कतै हजुर पनि पर्नुभयो कि ? सुपा देउरालीको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस यी ४ राशी हुने व्यक्ति संसार कै धनि हुन्छन् !जानी राखौ
बिहानै पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस्